UDokotela Wezesayensi, uJoseph Rudigi Rukema (ophakathi), ekanye namalungu “kasosesheni wabakhi Basemijondolo”.
Ukufunda okungakahleleki kungaba yithuluzi elinamandla ekusizeni ukuvala igebe elikhona kwezamakhono kanjalo nokusungula imisebenzi.
Lokhu kuyizincomo ezivele ocwaningweni obeluqhutshwa ngumfundisi ophezulu eSikoleni Sezifundo Ngenhlalo Yomphakathi uDkt Joseph Rudigi Rukema phakathi komakhenikha, abacwali bezinwele, nabasebenzi bezokwakha ezindaweni zasemijondolo.
URukema uthi imiphumela yocwaningo lwakhe ikhombisa ukuthi ababambiqhaza abangama-90% bafunde amakhono ngokufunda okungahlelekile, ebanganini babo ezihlotsheni noma emabhizinisini nezinhlangano ezisebenzayo.
'Ucwaningo luphinde luveze ukuthi iningi lalabo bayazisebenza besebenzisa amakhono abawathole ngokufunda okungakahleleki. Ngokusho kwemiphumela yocwaningo lwami, nakuba ukufunda okungakahleleki kubonakale kulivala ngempumelelo igebe lolwazi nokudala amathuba emisebenzi, kuye kwacaca ukuthi iningi lababambiqhaza linamakhono akhawulekile ekuphathweni kwamaphrojekthi, ukugcinwa kwezincwadi zezimali, ubuhlakani kwezezimali kanye nezokukhangisa okuphazamisa impumelelo yamabhizinisi abo. Kwaphinde kwaba sobala ukuthi iningi lababambiqhaza abanawo amakhono okubhala ngolimi lwabo lwebele noma abakwazi ukukhuluma noma ukubhala kahle isiNgisi,' kusho uRukema.
'Ngokusekelwe kulokhu okushiwo ngenhla nalokho engihlangabezane nakho futhi nangokukhulumisana nomphakathi, ngikholwa ukuthi kufanelekile ukuqala nokugqugquzela ukufunda okungahlelekile kanye nokuhweba emkhakheni njengendlela yokwakha imisebenzi kubantu abasha.'
URukema umeme bonke labo abanentshisekelo yokuba yingxenye yephrojekthi enjalo ukuba bavolontiye ukuhlinzeka ukuqeqesha kwezokuphathwa kwamaphrojekthi, amakhono ezezimali, ukugcinwa kwamabhuku ezimali nezokukhangisa ukuze kuzuze labo abaswele. Usiza nabakhi emijondolo ukuba basungule usosesheni wabakhi basemijondolo futhi unxusa noma ngubani noma-ke noma yiliphi ibhizinisi lokwakha elinenkontileka yokwakha ukuba like licabange ngokusebenzisa “Usosesheni Wabakhi Basemijondolo”.
URukema wathola i-PhD yakhe eziFundweni Zenqubomgomo Yezenhlalakahle e-UKZN emva kwalokho iNyuvesi yabe isimklomelisa nge-Fellowship yeminyaka emithathu emva kweziqu zobudokotela. Njengamanje uyisazi esihambela amanyuvesi amahlanu e-Afrika.
Ngenkathi eqhuba izifundo zakhe zeziqu ze-Honours ku-Public Policy e-UKZN, usebenze njengomqaphi wezimoto walandela ngokuba yi-security guard. Ngenxa yomlando wakhe kwezenhlalakahle nezomnotho, waba nothando lwezamabhizinisi emphakathini kanjalo nomoya wokuthuthukiswa komphakathi nokwamenza waqala amaphrojekthi amaningana emphakathini. URukema uphinde wasungula izindlela ezimbili zokuthuthukiswa: Imodeli yasebhange yokuzisiza komphakathi kanye naleyo Yokuhweba Ngokusebenzisa Ucwaningo - Ukuguqula Ucwaningo Lube ngamaPhrojekthi Omphakathi.
Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa, thumela i-imeyli ku josephr1@ukzn.ac.za noma ushaye ucingo ku (031) 260 2440.